Comedy Central Roast of Bruce Willis(2018) – Channel Myanmar
IMDB: 6.7/10 2378 votes
Bruce Willis, Cybill Shepherd, Dennis Rodman, Dom Irrera, Edward Norton, Jeff Ross, Joseph Gordon-Levitt, Kevin Pollak, LilRel Howery, Nikki Glaser
Comedy Central Roast of Bruce Willis(2018)
အခုတငျဆကျပေးမှာကတော့ ရုပျရှငျခဈြပရိတျသတျတိုငျး မသိသူမရှိလောကျတဲ့ ‘Die Hard’ မငျးသားကွီး
ဘရုဈဝီလဈကို အမှနျအကနျ တိုကျခိုကျပွီး ဟာသလုပျတဲ့အစီအစဉျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကိုတော့
‘Comedy Central Roast’ လို့ချေါပွီးတော့ ဟောလိဝုဒျက နာမညျကြျောတှေ တကျရောကျကာ နာမညျကွီး
သရုပျဆောငျတဈယောကျကို တညျပွီး မွှောကျပေးသလိုလိုနဲ့ အားရပါးရ အောကျကိုရိုကျခကြာ ဟာသလုပျတဲ့အစီအစဉျလေးပဲဖွဈပါတယျ။ ဘရုဈမတိုငျခငျ ဒီအစီအစဉျကို ဒျေါနယျထရမျ့က အတိုကျခိုကျခံ တငျဆကျခဲ့ပွီးတော့မှ သမ်မတာဖွဈသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျမှာ ဘရုဈနဲ့ ရငျးနီးတဲ့ အနုပညာလောကက လူတှကေ သူ့ကိုအမြိုးမြိုး ဖောငျးထုပွီး ဟာသလုပျထားတာကို ရီမောခံစားရမှာပါ။
ဒီဘိုးတျောကွီးရဲ့ကားတှရေငျးနှီးလေ ပိုပွီး ကွညျ့လို့ကောငျး ရယျလို့ကောငျးလဖွေဈတဲ့အပွငျ အခွားနာမညျကြျောမငျး သားမငျးသမီးတှကေိုလညျး တဈပွိုငျနကျဆုံစညျးရမှာဖွဈပါတယျ…. တျောတျောကို ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုတာဖွဈတဲ့အတှကျ စကားလုံးတှကေတော့ အနညျးငယျကွမျးနိုငျပါတယျ …တခြို့ဟာသတှကေ သမိုငျးနဲ့ခြီစဉျးစားရတဲ့အတှကျ သူ့အမာခံပရိသတျတှအေတှကျဆို ပိုပွီးဟာသမွောကျမှာပါ။
ပွီးတော့ ခငျဗြားတို့ ဒီကားကွညျ့ရငျ ပငျြးစရာမြားကောငျးနမေလားဆိုတဲ့သံသယအတှေးကို ဟိုး ၂၀၁၉ မှာ ထားခဲ့လိုကျပါ…..
ဒီအစီအစဉျလေးကိုကွညျ့ရငျ ဟာသရသကိုခံစားရမှာဖွဈပွီး နောကျထပျတဈခုကတော့ ခံစားမိလိုကျရငျ အခဈြဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာနဲ့
အမရေိကနျတှရေဲ့ ယဉျကြေးမှုတှကေိုပါ ခံစားရနိုငျပါတယျ…
ဇတျလမျးအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ Initiative ပဲဖွဈပါတယျ….
အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်တိုင်း မသိသူမရှိလောက်တဲ့ ‘Die Hard’ မင်းသားကြီး
ဘရုစ်ဝီလစ်ကို အမှန်အကန် တိုက်ခိုက်ပြီး ဟာသလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့
‘Comedy Central Roast’ လို့ခေါ်ပြီးတော့ ဟောလိဝုဒ်က နာမည်ကျော်တွေ တက်ရောက်ကာ နာမည်ကြီး
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ကို တည်ပြီး မြှောက်ပေးသလိုလိုနဲ့ အားရပါးရ အောက်ကိုရိုက်ချကာ ဟာသလုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘရုစ်မတိုင်ခင် ဒီအစီအစဉ်ကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်က အတိုက်ခိုက်ခံ တင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့မှ သမ္မတာဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ ဘရုစ်နဲ့ ရင်းနီးတဲ့ အနုပညာလောကက လူတွေက သူ့ကိုအမျိုးမျိုး ဖောင်းထုပြီး ဟာသလုပ်ထားတာကို ရီမောခံစားရမှာပါ။
ဒီဘိုးတော်ကြီးရဲ့ကားတွေရင်းနှီးလေ ပိုပြီး ကြည့်လို့ကောင်း ရယ်လို့ကောင်းလေဖြစ်တဲ့အပြင် အခြားနာမည်ကျော်မင်း သားမင်းသမီးတွေကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက်ဆုံစည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်…. တော်တော်ကို ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် စကားလုံးတွေကတော့ အနည်းငယ်ကြမ်းနိုင်ပါတယ် …တချို့ဟာသတွေက သမိုင်းနဲ့ချီစဉ်းစားရတဲ့အတွက် သူ့အမာခံပရိသတ်တွေအတွက်ဆို ပိုပြီးဟာသမြောက်မှာပါ။
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ ဒီကားကြည့်ရင် ပျင်းစရာများကောင်းနေမလားဆိုတဲ့သံသယအတွေးကို ဟိုး ၂၀၁၉ မှာ ထားခဲ့လိုက်ပါ…..
ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရင် ဟာသရသကိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ ခံစားမိလိုက်ရင် အချစ်ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာနဲ့
အမေရိကန်တွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါ ခံစားရနိုင်ပါတယ်…
ဇတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Initiative ပဲဖြစ်ပါတယ်….
File Size : (900 MB) and (350 MB)
Translated by Initiative
Bruce Willis Cybill Shepherd Dennis Rodman Dom Irrera Edward Norton Jeff Ross Joseph Gordon-Levitt Kevin Pollak LilRel Howery Nikki Glaser
Bruce Willis Cybill Shepherd Demi Moore Dennis Rodman Dom Irrera Edward Norton Jeff Ross Joseph Gordon-Levitt Kevin Pollak LilRel Howery Martha Stewart Nikki Glaser
Option 1 fastload.cc 900MB WEB-DL 720p
Option2Soliddrive.co 900MB Uploading
Option3disk.yandex.com 900MB WEB-DL 720p
Option4usersdrive.com 900MB WEB-DL 720p
Option5usersdrive.com 900MB WEB-DL 720p
Option6yoteshinportal.cc 900MB WEB-DL 720p
Option7megaup.net 900MB WEB-DL 720p
Option 8 mega.nz 900MB WEB-DL 720p
Option9upstream.to 900MB WEB-DL 720p
Tarzan2(2005) 2005
Bullets of Justice (2019) 2019
[18+] Love Skill (Aka) Mango Tree (2013)
Norm of the North: King Sized Adventure (2019) 2019
The Lobster(2015) 2015
Hello, Mrs. Money ( 2018 ) 2018